Sina mpanamboatra sy mpamatsy ampahany vy | Famoronana Bocheng
Ny orinasanay dia manam-pahaizana manokana amin'ity sehatra ity mandritra ny 10 taona mahery. Afaka manome karazana Ductile Iron Casting sy faritra vy Casting Gray izahay
Mamokatra mazàna amin'ny vy volondavenona HT200, HT250, vy fantsona 65-45-12, 60-40-18, 80-55-06, 80-60-03, sns.
Vy fanariana volondavenona / volondavenona
Ny vy volondavenona, na vy vy volondavenona, dia karazan-tsolika vy izay manana mikraostrrafitra grafitika. Izy io dia antsoina hoe loko volondavenona amin'ny vaky izay foronina, izay noho ny fisian'ny grafita.
Izy io no vy fanao mahazatra indrindra ary fitaovana fandefasana be mpampiasa indrindra miorina amin'ny lanjany.
Izy io dia ampiasaina amin'ny trano fonenana izay ny maha-henjana ny singa dia zava-dehibe kokoa noho ny tanjaka mihombo, toy ny bolabola misy motera fandoro anatiny, trano fonenana, vatana valizy, boaty elektrika ary haingo haingo. Ny fantsom-pandrefesana avo be an'ny vy sy ny hafanana manokana dia matetika no ampiasaina hanamboarana fitaovana fandrahoana vy sy hozatra kapila.
Ny vokatra fanariana vy fantsom-bozaka dia be mpampiasa amin'ny fiara-fiara, lamasinina, kamio, kojakoja fiara, kojakojam-pitrandrahana fitrandrahana harena ankibon'ny tany, faritra milina fambolena, faritra misy ny milina fanodinana, faritra misy valves ary paompy sns
Azontsika atao ny manapaka ny ampahany amin'ny fanodinana vy araka ny sary sy ny teknika ilaina.
Afaka manao machining cnc izahay aorian'ny fandefasana fampiasam-bola arakaraka ny zavatra takinao. Ataovy ihany koa ny fitsaboana an-kalamanjana toy ny fanapoahana bala, sary hosodoko, hosodoko zinc, famolahana…
Ankoatr'izay, ny injenierantsika matihanina dia afaka manome sosokevitra mety amin'ny sary sy sary famokarana ataonao ..
Noho ny kalitao milamina sy ny vidiny mirary, ny vokatra fanariana anay dia naondrana tany Amerika Avaratra, Eropa Andrefana, Austria, Amerika atsimo ary India.
Mandritra ny fandraisana anjara am-boalohany ny fizotry ny famolavolana ny mpanjifa dia manome fahan'ny matihanina ho an'ny mpanjifantsika izahay amin'ny lafiny azo atao, ny fihenan'ny vidiny ary ny fomba fiasa. Tongasoa eto amintsika ny hifandray aminay amin'ny fanadihadiana ara-teknika sy ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa.
Teo aloha: T takelaka vy natsipy vy
Manaraka: fitaovana fandrefesana granite